China Cryptococcal Antigen Test mpanamboatra sy mpamatsy | Liming Bio
The StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test Device dia famerenam-bidy haingana amin'ny famerenana ny famerenana ny polysaccharide antigène an'ny karazan-karazany Cryptococcus (Cryptococcus neoformans ary Cryptococcus gattii) amin'ny serum, plasma, ra manontolo ary tsiranoka hazondamosin'ny ati-doha (CSF). Ny fitsapana dia fanandramana laboratoara ampiasain'ny dokotera izay afaka manampy amin'nyfitiliana ny cryptococcosis.
Ny Cryptococcosis dia avy amin'ny karazany roa amin'ny karazana Cryptococcus (Cryptococcus neoformans sy Cryptococcus gattii). Olona manana fahasembananany tsimatimanota avy amin'ny sela dia atahorana indrindra hidiran'ny aretina. Cryptococcosis dia irayamin'ireo areti-mifindra mpanararaotra mahazatra indrindra amin'ny mararin'ny SIDA. Famantarana nyNy antigen cryptococcal amin'ny serum sy CSF dia nampiasaina be tamin'ny fahatsapana avo sy miavaka.
The StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test Device dia namboarina mamantatra ny karazana Cryptococcus sarotra amin'ny alàlan'ny fandikana ny loko ny loko fampandrosoana ao amin'ny tsipika anatiny. Ny membrane dia tsy afaka nihetsika niaraka tamin'ny antiAntibody monoklonal Cryptococcal eo amin'ny faritra andrana. Nandritra ny fitsapana, ny santionanyavela hanao fihetsiketsehana amin'ny partial anti-Cryptococcal anti-Cryptococcal misy lokony mpampifangaro, izay namboarina teo amin'ny fehezan-kevitry ny fitsapana. Ilay fangaro avy eomihetsika amin'ny membrane amin'ny alàlan'ny hetsika capillary, ary mifanerasera amin'ny reagents amin'ny manify. Raha ampy ny antigène Cryptococcal amin'ny santionany, milokony tarika dia hiforona ao amin'ny faritra fitsapana ny membrane. Fanatrehan'ity tarika miloko itymanondro vokatra tsara, raha toa kosa ny tsy fisiany manondro vokatra ratsy. Bika Aman 'endrikany tarika miloko amin'ny faritry ny fibaikoana dia toy ny fanaraha-maso ny fomba fiasa. Manondro izanyny habetsaky ny santionany dia nampiana ary ny famonoana ny membrane nitranga.
■ Ity kit ity dia ho an'ny fampiasana diagnostika IN VITRO ihany.
■ Ity kit ity dia natao ho an'ny PROFESSIONAL ihany.
■ Vakio tsara ireo torolalana alohan'ny hanaovana ilay fitsapana.
■ Ity vokatra ity dia tsy misy akora nalaina avy amin'olombelona.
■ Aza mampiasa atiny kit intsony aorian'ny daty lany daty.
■ Araraoty fa mety ho areti-mifindra ny santionany rehetra.
■ Araho ny fomba fanao amin'ny laboratoara sy ny torolàlana momba ny biosafety amin'ny fikirakirana sy fanariana fitaovana mety infective. Rehefa ny fizotran'ny fitsapana diafenoy, ario ny santionany aorian'ny famindrana autoclave azy ireo amin'ny 121 ℃ farafaharatsiny 20 min. Raha tsy izany, dia azo tsaboina amin'ny Sodium Hypochlorite 0,5% izy ireomandritra ny ora maro alohan'ny fanariana.
■ Aza pipette reagent amin'ny vava ary tsy mifoka na mihinana rehefa manao fampisehoana assays.
■ Manaova fonon-tànana mandritra ny fomba rehetra.
Previous: Chlamydia Antigen
Manaraka: Fitsapana antigen HSV 12
Fitaovana rafitra biosafety roa ho an'ny fitsapana antigen Sars-Cov-2
Sars-Cov-2 Antigen Fitsapana
H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19,